Fiainam-pirenena : mandeha avokoa ny tsindry samihafa (NewsMada) | AEMW
Fiainam-pirenena : mandeha avokoa ny tsindry samihafa (NewsMada)
Tratry ny angaredon’ny tsindry samihafa ny fitondrana. Manomboka mampiaka-peo manoloana ny raharaham-pirenena ireo hery samihafa eto amin’ny firenena, mialoha indrindra ny handraisantsika ireo fivoriana iraisam-pirenena ato ho ato. Eo ireo antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny avy amin’ny eveka samy maneho ny ahiahiny. Tonga hatrany amin’ny fitakiana ny hirosoana amin’ny fihaonambem-pirenena izany noho ny fahitan’izy ireo fa tena efa latsaka an-katerana isika amin’ny lafiny rehetra.
Hanaratsy endrika antsika amin’ny fitsidihan’ny filohan’ny Bad eto izany hetsika fanoherana miseholany izany.
Nambaran’ny tatitry ny FMI koa ny tokony hijerena ny fahantran’ny mponina. Ny hametrahana ny politikan’ny fitsitsiana, hampihenana ny fandaniam-bolam-panjakana ka hampiakarana ny fampidiran-ketra. Fepetra anisan’ny takin’izy ireo ny hanitsiana amin’ny tena izy ny vidin-tsolika, ny hampiakarana ny vidin-jiro, ny fanovana ny rafitry ny Jirama sy ny Air Madagascar, miaraka amin’ny fampihenana ny fanampiana (subvention) azy ireo. Hifanindran-dalana amin’ireo anefa ny fitakiana sosialy, ho tsy fanekena izany.
Kolikoly sy tsy fahaiza-mitantana
Eo koa ny tsy fahaiza-mitantana ka ao anisany ny kolikoly mahazo vahana , ny tsimatimanota manoloana ny fanodinkodinam-bola, ny tsy fandriampahalemana, ny nandaniana ilay lalàm-pamoretana momba ny serasera, mitondra any amin’ny jadona. Feno ny fepetra hahatongavana amin’ny fionganan’ny mpitondra raha miainga amin’ireo rehetra ireo. Eo koa ny lainga tsara lahatra ataon’ny mpitondra…
Ao anatin’izany, efa mandeha any an-dalantsara any ny fiketrehana hananganana ny Antenimieran-dalàmpanorenana, hanadio ny andininy sasany ao amin’ny lalàmpanorenana. Fa eo koa ny hanovana ny firafitry ny Ceni, ahatongavana amin’ny fifidianana madio sy malalaka, mialoha ny fotoana.
Mampanahy ny iraisam-pirenena indray izao tranga rehetra izao. Mety hiverina handray an-tanana ny raharaha ny Sadc.
Ka inona ary ny hatao ? Tsy maintsy miroso amin’ny fanadiovana ireo ekipany ny filoham-pirenena. Tafiditra ao anatin’izany ireo tsy mahomby. Hirosoana ny fifampiresahana an-kitsim-po amin’ny hery rehetra ary hatao mahery vaika ny ady amin’ny kolikoly…
← Lakolosy… (NewsMada)
Forum des médias sur « la Ceinture et la Route » : Un mode de coopération gagnant-gagnant (Midi-Madagascar) →